Sheeko dheer qor! – Kaasho Maanka
Maxaa dhacaya sheekada aad qoraysid dhexdeeda? Sidee bay dhacdooyinku isu daba joogaan ama isugu xigaan? Sidee bay u qaybsan yihiin waxyaalaha dhacayaa? Sidee yihiin shakhsiyaadka sheekada jilayaa muuqaal ahaan iyo dabci ahaan? Meelaha ama fagaarayaasha sheekada lagu jilayaa sidee bay u sawiran yihiin? Ujeeddooyinka ama danaha shakhsiyaadka jilaya sheekadu maxay yihiin? Maxaa shakhsiyaadka ka hor imanaya oo ay xallinayaan? Habkee ama qaabkee baa looga dabaalanayaa dhibaatooyinka sheekada ku jira?
Weydiimahaas iyo kuwo kale haddii aad maskaxda ku haysid waxa aad hindisi kartaa sheeko fiican. In sheeko dheer la qoraa waa hawl adag oo u baahan dadaal iyo in lagu tababarto qoraalka.
Ugu horrayn waa in uu qofku qorsheeyaa waxa uu sawiri doono sida dadka sheekada jilaya, dhacdooyinka sheekada iyo fagaarayaasha ay wax ka dhacayaan. Waa in uu akhristuhu sheekada ka dhex helaa dad uu u garanayo sidii dad caadi ah oo uu yaqaan, waayo haddii shakhsiyaadka sheekadu aysan qeexnayn ku duxi mayaan akhristaha. Waxaa la mid ah waxyaalaha dhacaya iyo meelaha ay ka dhacayaan. Waa in uu qoraagu la yimaadaa dhacdooyin isku xiran oo wada macquul ah iyo fagaarayaal uu akhristuhu u garanayo sidii meelo uu soo arkay.
Haddii aad jeceshahay in ay sheekada aad qortaa miigganaato waxaa lamahuraan ah in aad akhridid dad kale sheekooyin ay qoreen oo badan. Sida aad dadka kale ugu dayanaysaa ma aha in aad waxyaalihii ay qoreen soo guurisid ee waa in aad ka baratid habka loo sawiro sheekooyinka. Markii uu akhriskaagu sii kobcaba qoraalkaagu waa uu sii korayaa.
Wadahadalka ay dadka sheekada ku jiraa weydiin iyo afcelin sameeyaan ama ay sheekaystaan aad buu jilitaanka sheekada ugu fiican yahay. Sheekaysiga ay shakhsiyaadku sameeyaan waxa uu soo saaraa dadka shakhsiyaddooda, waxa uu dhisaa dhacdooyinka sheekada, waxa uuna sawiraa fagaarayaasha wax lagu jilayo.
QORMO LA XIRIIRTA: Masayrka Maangaabyada
Waa in aad doorataa qaabka aad u sheekaynaysaa in uu yahay habka “Aniga”, “Adiga” ama “Isaga/iyada/iyaga”! Habka “Aniga” waa in aad tusaale ahaan u sheekaysid sidan “Baabuur baan inta ka boodey dhabarka ka jabay”, habka “Adiga” tusaale ahaan waa “Baabuur baad inta ka booddey dhabarka ka jabtay”, habka saddexaadna waa dadka aan ahayn labada qof oo wada hadlaya oo tusaale ahaan waa “Baabuur buu inta ka boodey dhabarka ka jabay”.
Waxa aynu hore u soo sheegnay fagaaraha sheekada lagu jilayo ama bay’adda ay wax ka dhacayaan in aad loo sawiraa in ay lamahuraan tahay. Guri, gaari, geed iyo geel wixii fagaaraha sheekada soo galaa waa in ay u sawirmaan sidii wax loo jeedo oo goobjoog loo yahay. Haddii uusan jawiga wax ka dhacayaan aad u muuqan ama qeexnayn sheekadu waa naafo.
Ugu danbayn waa in ay sheekooyinkaagu yeeshaan hannaan adiga kuu gooni ah iyo dhadhan aad gaar u leedahay. Waa in uu hal-abuurkaagu yeeshaa astaamo aysan cid la wadaagtaa jirin oo lagu soo xusuusto. Haddii aad dad kale ku dayatid ama aadan lahayn dareen muuqda weligaa qoraalkaagu saamayn weyn yeelan mayo.
W/Q: Shaafici Xasan Maxamed 4th April 2018